Bollywood | Infomala
सलमान खानको गत शुक्रबार सार्वजनिक भएको चलचित्र ‘बजरंगी भाईजान’ले बक्स अफिसका केही रेकर्डहरू तोडेको छ । एक नयाँ र फरक कथावस्तु भएको र निर्देशन पनि फरक ढंगले गरिएको चलचित्रले बक्स अफिसका ५ वटा रेकर्ड तोडेको हो । यो चलचित्रमा ‘पवन’को भूमिका निर्वाह गरेका सलमानको यो भूमिका अहिलेसम्मकै सर्वोत्कृष्ट रहेको मानिएको छ । उनका साथै बालिकाको भूमिका निर्वाह गरेकी हर्षाली मल्होत्राले…
Comments Off on सलमानखान को ‘बजरंगी भाईजान’ले तोड्यो बक्स अफिसका ५ रेकर्ड
चर्चा पाउन थप्पडको नाटक !
गत नोभम्बरमा बलिउडकी नायीका गौहर खानमाथी घटेको थप्पडकाण्डमा नयाँ मोड आएको छ । थप्पड हान्ने व्यक्ति अकिल मलिकले गौहर खानकै आग्रहमा गौहरलाई थप्पड हानेको खुलासा गरेका छन् । भारतीय सञ्चारमाध्मयका अनुसार आरोपी अकिलले यस्तो खुलासा गरेका हुन् । इन्डियाज रक स्टारको फाइनलका क्रममा थप्पड हान्नका लागि गौहरले भनेको आरोप अकीलले लगाएका छन् । आरोपीका अनुसार गौहरले जब अर्जुन कपूर स्टेजमा…
Comments Off on चर्चा पाउन थप्पडको नाटक !
बलिउडकी सबैभन्दा महँगी अभिनेत्री हुन्- दीपिका पादुकोण। फिल्म करिअरको सात वर्षमै यी २९ वर्षीया अभिनेत्रीले आफूलाई सफलताको शिखरमा पुर्याएकी छिन्। बलिउडमा सबैभन्दा बढी पारिश्रमिक लिने अभिनेत्री दीपिकाले सञ्जय लीला भन्सालीको फिल्म 'बाजीराव मस्तानी'का लागि नौ करोड भारु लिएकी छिन्। अहिले उनी यही फिल्मको छायांकनमा व्यस्त छिन्। सन् २००७ मा शाहरुख खानसँग फिल्म 'ओम शान्ति ओम'मा काम गरेर दीपिकाले बलिउडमा प्रवेश…
Comments Off on बलिउडका चार महंगा हिरोइनहरू
मनोरंजन / महिला संसार
दिपिका पादुकोणको ट्वीट्- ‘हो, मेरो वक्षस्थल छ । कसैलाई समस्या ?’
बलिउड अभिनेत्री दिपिका पादुकोणले आफ्ना वक्षस्थलको विषयमा एक अंग्रेजी अखवारमा प्रकाशित तस्विरप्रति आक्रोश ब्यक्त गरेकी छिन् । उनको क्षस्थलको बीचको भाग देखाउने गरी प्रकाशित उक्त तस्विर देखेपछि दिपिकाले ट्वीटरमा आक्रोश पोखेकी हुन् । ट्वीटरमा उनले लेखेकी छिन्- ‘हो, म केटी हो । मेरा बक्षस्थल छन् । कसलाई के टाउको दुखाइ ?’ । उक्त अखवारले महिलाको सम्मान गर्न नसकेको भन्दै महिला ससक्तिकरणका…
Comments Off on दिपिका पादुकोणको ट्वीट्- ‘हो, मेरो वक्षस्थल छ । कसैलाई समस्या ?’